News Collection: सात सय ५० प्रहरीका दुई श्रीमती
सात सय ५० प्रहरीका दुई श्रीमती
काठमाडौं, ३ साउन
बहुविवाह गर्ने सर्वसाधारणलाई फौजदारी मुद्दा लाग्छ, तर नेपाल प्रहरीका बहालवाला सात सय ५० अधिकारीले बहुविवाह गरेका छन् ।
हालसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालयमा दुई डिएसपीसहित सात सय ५० जना प्रहरीका श्रीमतीले बहुविवाहको उजुरी दर्ता गरेका छन् । सोही उजुरी पुष्टि भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनीहरूको आधा तलब जेठी श्रीमतीलाई दिँदै आएको छ ।
तर पनि शक्तिको आडमा बहुविवाह गर्ने प्रहरीको संख्या बढ्दै गएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले कारबाहीको तयारी गरेको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा नपठाउने, पुरस्कार नदिइने र बढुवामा पनि पछि पार्ने प्रस्ताव प्रहरी प्रधान कार्यालयले अघि सारेको छ ।
स्रोतका अनुसार विभागले बहुविवाह गर्ने सात सय ५० प्रहरीको नामावलीसहित प्रहरीको पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी -पिसिसी)को बैठकमा त्यससम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेको छ । पिसिसी बैठकमा प्रस्ताव पारित भएपछि बहुविवाह गर्ने प्रहरीलाई सुविधाबाट बन्चित गरी कारबाही गर्न लागिएको हो ।
'बहुविवाहलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले सुविधाबाट बन्चित गर्न लागेका हौैँ,' प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागका एआइजी नरेश गुरुङले भने, 'हामी त्यससम्बन्धी प्रस्तावमा वर्कआउट गरिरहेका छौँ ।'
अपराध अनुसन्धान विभागअन्तर्गतको महिला सेवा निर्देशनालयले त्यससम्बन्धी प्रस्ताव दुई साताअघि एआइजी गुरुङलाई बुझाएको हो । सोही प्रस्तावमा विभागले छलफल गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार बहुविवाह गर्नेहरूमा दुई डिएसपी र १६ इन्स्पेक्टरसमेत छन् । आफूमाथि सौता हालेको भन्दै डिएसपी कृष्ण थापाकी श्रीमती दीपाले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा उजुरी हालेर आधा तलब लिँदै आएकी छिन् । अर्का डिएसपी कृष्णजी अधिकारीकी श्रीमती गायत्रीले पनि उजुरी हाली आधा तलब लिने गरेकी छिन् ।
बहुविवाह गर्ने इन्स्पेक्टरहरूमा राजेन्द्र थापा, सनबहादुर गुरुङ, श्यामप्रताप सेन, यज्ञबहादुर भण्डारी, कृष्ण मानन्धर, सूर्यबहादुर थापा, माधवप्रसाद बोगटी, हरि बरुवाल, रामजी अधिकारी, कृष्णजी अधिकारी छन् । त्यस्तै इन्स्पेक्टर टेकबहादुर गुरुङ, शिवजी श्रेष्ठ, दानबहादुर मल्ल, गोरखबहादुर मल्ल, सुजन श्रेष्ठ र प्रकाश मल्लका पनि दुई श्रीमती छन् ।
बहुविवाह गर्ने धेरै प्रहरी भन्ने तल्लो तहका छन् । अपराध अनुसन्धान विभाग स्रोतका अनुसार ६२ जना प्रहरी नायव निरीक्षक -सई)का दुई श्रीमती छन् । त्यस्तै एक सय १९ असई, दुई सय १९ प्रहरी हवल्दार, तीन सय १८ प्रहरी जवान र १४ जना प्रहरी परिचरका पनि दुई श्रीमती छन् ।
नेपालको कानुनअनुसार बहुविवाहमा संलग्नलाई फौजदारी मुद्दा लाग्छ । मुलुकी ऐनको विवाहसम्बन्धी महलमा बहुविवाह गर्नेलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
बहुविवाह गर्नेविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएकोमा प्रहरी अधिकारी जागिरबाट समेत निलम्बित हुन्छन् । तर, जागिरबाट हटाउनुभन्दा संगठनले उनीहरूको तलब जेठी श्रीमतीलाई आधा बाँड्ने नीति लिँदै आएको छ । 'तर पैसा हुने प्रहरीले त जति पनि बिहे गर्न सक्ने भयो,' अपराध अनुसन्धान विभागका एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, 'त्यसकारण हामीले बहुविवाह गर्नेविरुद्ध कडा कदम चाल्न लागेका हौँ ।'
तल्ला तहका प्रहरीको तलब बाँडेर मिलापत्र गरिन्छ भने माथिल्ला तहका प्रहरीको भने मोटो रकम दिएर मिलाइने गरिएको स्रोत बताउँछ । प्रहरीका कतिपय हाकिमका तीनवटीसमेत श्रीमती रहेको स्रोत बताउँछ । तर, बेइज्जत हुने भएकाले घटनालाई गुपचुप राखी माथिल्ला तहका प्रहरीको भने तलब बाँडिने गरिएको छैन ।
६० हजारको प्रहरी संगठनमा सात सयभन्दा बढी प्रहरीका दुइटी श्रीमती हुनु संगठनकै बदनामी भएको एक उच्च महिला प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । त्यसकारण बहुविवाह गर्नेलाई कम्तीमा पनि विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने प्रहरी अधिकारी नै बताउँछन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी पनि देशको ऐन-कानुन सबैलाई बराबर हुने र बहुविवाह गर्ने प्रहरीलाई सर्वसाधारणलाई जस्तै कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।
सुरक्षाअधिकारीकै किन धेरै बहुविवाह ?
काठमाडौं/ बहुविवाह गर्नेमा अरू कर्मचारीभन्दा प्रहरी र सेनाका अधिकारीहरू बढी हुने गरेका छन् । आखिर किन ? उनीहरूलाई परिवारसँग सधैंजसो टाढा बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, अर्को प्रहरी-सेनाको जागिर आकर्षक
मानिने भएकाले उनीहरूप्रति महिला पनि नजिक हुन्छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी भन्छिन्, ँप्रहरी र सेनाका अधिकारी धेरैजसो समय परिवारबाट टाढा हुने र तनावमा काम गर्नुपर्ने भएकाले पनि जता सरुवा भयो, त्यतै महिलासँग निकटता बढाउने गर्छन्, सम्बन्धबारे खुलेपछि बिहे गर्ने गरेको देखिन्छ ।’
प्रहरीको जागिरलाई समाजमा शक्तिशाली र कमाउ मानिने भएकाले महिला पनि उनीहरूप्रति तुलनात्मक रूपमा बढी नजिक हुन खोज्ने र त्यही कारण पनि बहुविवाहका घटना बढेको प्रधान कार्यालयका एक प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ ।